PressReader - Isolezwe lesiXhosa: 2018-09-20 - Baqaqambisa uNongqawuse, uMaqoma noMqhayi
Baqaqambisa uNongqawuse, uMaqoma noMqhayi
Isolezwe lesiXhosa - 2018-09-20 - FRONT PAGE - SITHANDIWE VELAPHI
IMBALI ngeengcinga kwanezehlo zesona sithathu siqaqambe kunene kwimbali yomthonyama kweli lizwe, iza kube idakancwe eQonce ngoMgqibelo, 22 eyoMsintsi, kuvunyelwa uluntu ukuba luxhamle ngolwazi.
Imbali ngoNkosi Jongumsobomvu Maqoma (1798-1873), umbhali uSamuel Edward Krune (SEK) Mqhayi (1875-1945) kwanoMprofeti uNongqawuse (1841-1898) iza kube iselubala simahla eThe Mall eQonce, ngoMgqibelo, ukusuka ngentsimbi yeshumi kusasa ukuya kweyesine malanga.
Oku kuza emva kwengcingane yesibini saseBhisho uYanga Mgabadeli noKwanele Mboso, bendibanisela ebizwa Ukwanda Collective.
“Isicwangciso sethu ngalo mboniso ususwa yinto yokuba sigqibe ekubeni siqaqambise imeko yentlalo yesi sithathu, sidontsa indlela ababephila ngayo kumaxesha wabo,” utshilo uMgabadeli ebalisela I’solezwe lesiXhosa.
UMgabadeli uthi benze uphando besebenzisana neentsapho zala maqhawe, kodwa uyibalule eyokuba usapho lakuloNongqawuse abakhange bakwazi ukulufumana. Ukwathe bakwasebenzisene namaziko afana neAmathole Museum kwaneXhosa Gallery.
“Sibe nombono weenkokheli esakhe sanazo ngaphambili, apho siqale sathatha utat’ uMaqoma kwakunye noNongqawuse sizama ukubabonakalisa ukuba bebenokuba ngabantu abanjani ukuba bebephila namhlanje. Yena utat’ uMqhayi simbeke esizikithini, exela ibali ngala maqhawe,” utshilo uMgabadeli.
“Siyenza le nto sisebenzisa iimpahla endizithungileyo kwanemifanekiso, sidontsa apho zazisenzekela khona izehlo zesi sithathu. Umzekelo xa sithetha ngoNongqawuse, umba wokuxoxwa kwemibandela kaNongqawuse, kwakusenzekela kwaNgqika. Siyile sathatha imifanekiso, ngelizama ukuxela eli bali. Ngokwembali ngoMqhayi, siye eNtabozuko sayokuthatha imifanekiso,” kutsho uMgabadeli.
Uthi abo baza kuba nenyhweba yokubona lo mboniso, bakuvuna lukhulu.
“Sikholelwa ukuba kuninzi ekungavunwa sisizwe kwimbali yaba bantu bathathu sibachongileyo. Kuninzi okuye kuthethwe ngoNongqawuse, ukusuka ekuphembeni into yokuba makubulawe imfuyo ukuya nakwezinye iziprofeto zabo. Ibali ngembali kaMaqoma lide kakhulu, wade wabanjwa waya eRobben Island.
“Sibone ukuba masizidine senze uphando ukuze size nolwazi olungcono. Umntu oza kulo mboniso, uza kufumana imbali ecacileyo ngaba bantu,” utshilo uMgabadeli.
Iintsapho zakwaMaqoma nakwaMqhayi zimenyiwe, kuquka neNdlu yeeNkosi zeMveli kwaneSebe lobuGcisa neNkcubeko.